January 2021 - Khitalin Media
January 31, 2021 by Khitalin Media
လင်မယား ဖြစ်ရခြင်း အခြေခံအကြောင်းရင်း (၂) မျိုး…
လင်မယား ဖြစ်ရခြင်း အခြေခံအကြောင်းရင်း (၂) မျိုး ၁။ ပုဗ္ဗသန္နဝါသ – ရှေ့ဘဝ၊ ဘဝ မှ လင်မယားဖြစ်ခဲ့ရဖူးသောကြောင့် လင်မယားဖြစ်ရ၏။ ၂။ ယခုဘဝတွင် တစ်ဦး၏အကျိုးကို တစ်ဦးက စေတနာအပြည့်နှင့် သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးခြင်းကြောင့် လင်မယားဖြစ်ရ၏။ အောက်ပါအချက်များနှင့် တူညီတဲ့ အကြင်လင်မယားဖြစ်ပါက သမ္မသဒ္ဓါ – သဒ္ဒါတရားချင်းတူညီ သမသီလာ – အကျင့်ချင်းလည်းတူညီ သမစာဂါ – စွန့်ကြဲပေးကမ်းမှုချင်းလည်း တူညီ သမပညာ – အယူအဆ၊ အတွေးအခေါ်၊ ပညာချင်းလည်း တူညီမည်ဆိုပါက ဤ လင်မယား သည် ယခု ဘဝတွင် ကွဲကွာခြင်း မရှိသည့်အပြင် ယခုလက်ရှိဘဝတွင်သာမက နောက်ဘဝဆက်ဆက်တိုင်အောင် ၁ – အကျိုးစီးပွား တိုးတက်ခြင်း ၂ – ကိုယ်ချမ်းသာ … Read more
အသားလှုပ်၊လက်ဝဲ လက်ယာမဟုတ်သော အသားလှုပ်နိမိတ် အဟောများ
အသားလှုပ်၊လက်ဝဲ လက်ယာမဟုတ်သော အသားလှုပ်နိမိတ် အဟောများ ၁။ ကျောကုန်းလှုပ်မူ အဝတ်ရမည်။ ၂။ ကိုယ်လှုပ်မူ မယားနှင့်အတူ စကားဆိုရမည်။ ၃။ ခါးလှုပ်မူ ဥစ္စာပျောက်မည်။ ၄။ ချက်လှုပ်မူ နှစ်လိုဖွယ်သော ဥစ္စာ ရမည်။ ၅။ထိပ်လှုပ်မူ မင်းပူဇော်ခံရမည်။ ၆။ နှာခေါင်းလှုပ်မူ ချစ်သူများမည်။ ၇။ နှလုံးသားလှုပ်မူ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက် ဥစ္စာပေးလာမည်။ ၈။ မေးဖျားလှုပ်မူ အချင်းများမည်။ ၉။ လည်ပင်းလှုပ်မူ တန်ဆာဆင်ရမည် ၁၀။ အထက်နှုတ်ခန်းလှုပ်မူ ရန်ဖြစ်မည်။ ၁၁။ အောက်နှုတ်ခန်းလှုပ်မူ အဝေးစကားပြောကြားရမည်။ ၁၂။ အင်္ဂါဇာတ်လှုပ်မူ မယားနှင့်စကားများမည်။ ဥစ္စာရမည်။ ၁၃။ ဦးခေါင်းလှုပ်မူ ကျွန်ဖြစ်မည်။ ၁၄။ ဦးရေလှုပ်မူ နာဖျားမည်။ ….. လက်ယာ အသားလှုပ်နိမိတ်အဟော ၁။ လက်ယာ … Read more
လောကမှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ကိုယ်ပေးတဲ့အတိုင်း ပြန်ရတယ်ဆိုတာ ခပ်ရှားရှားရယ်ပါ။ အချစ်ရေးတစ်ခု အဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါမှာ ပိုချစ်တဲ့သူက ပိုနာကျင်ရစမြဲပါပဲ ကိုယ့်ဖက်က ဘယ်လောက်ပဲချစ်ခဲ့၊ ပေးဆပ်ခဲ့ပါစေ ကိုယ်အသည်းကိုခွဲပြီး၊ ကိုယ့်အပေါ်ကို ရက်စက်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့လည်း ကြုံရမှာပါ။ ဒီလိုကြုံလာရတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်ဖို့၊ ကိုယ့်ဘဝကိုအနစ်မွန်းခံဖို့ထက်စာရင် သူ့ကိုဘဝထဲကထုတ်လိုက်တာ ပိုပြီးမှန်ကန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရက်စက်သွားတဲ့သူကို အပြီးအပိုင်မေ့ဖျောက်နည်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) သူ့အကြောင်းမတွေးပါနဲ့တော့ မိုးလင်းလို့ မျက်စိနှစ်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သင့်ဘယ်ဘယ်ရင်အုံကို စူးခနဲဖြစ်စေတဲ့ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေ၊ သူ့အကြောင်းတွေကို အခုကစပြီး မတွေးပါနဲ့တော့။ သူ့အကြောင်းကိုတွေးနေမယ့်အစား တစ်ခုခုမှာ အာရုံကိုလွှဲထားလိုက်ပါ။ သူ့အကြောင်းဝင်လာတော့မယ် ဆိုတာနဲ့ တခြားအကြောင်းနဲ့အာရုံလွှဲတဲ့အလေ့အကျင့်ကို လုပ်ပါ။ ကြာလာတဲ့အခါ သူ့အကြောင်းတွေးဖို့တောင် သင်သတိရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ (၂) သူ့အကြောင်းမသိချင်ပါနဲ့ သူငါ့ကို လွမ်းနေမလား၊ သူခံစားနေရမလား၊ သူလည်းငါ့ကိုလွမ်းရဲ့လား၊ အချစ်သစ်များရနေပြီလား အဲလိုမျိုး မေးခွန်းတွေကို ရပ်လိုက်ပါ။ … Read more
တောက ဒေါက်တာရမ်းကုနှင့် မြို့ကြီးသူ မမနဲ့တွေကြလေသောအခါ…
နယ်မြို့သေးသေးလေးတွေမှာ… ရမ်းကုတွေခေတ်ကောင်းစဉ်ကပေါ့ ….ရမ်းကုတစ်ယောက်ကတော့ တော်တော်နာမည်ကြီးတယ် … ကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်း ဘာရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ် သူပေးတဲ့ဆေးကတော့.. ဘာမီတွန်ပဲ… အာ့ကြောင့် နာမည်အရင်းတောင်ပျောက်ပြီး အားလုံးသိကြတာကတော့ သူ့နာမည် ဒေါက်တာဘာမီတွန် တနေ့တော့ .. မြို့ကြီးကနေ အလည်ရောက်လာတဲ့ မတ်မတ်တယောက်က ဒေါက်တာဘာမီတွန်ကို ပညာစမ်းချင်လို့ သူ့သမီးလေးကိုခေါ်သွားပြီး….. ဆရာ ကျွန်မသမီးလေးဖျားချင်သလိုလိုဖြစ်နေလို့ပါ ” ဆိုတော့… ပေးလိုက်တဲ့ဆေးက ဘာမီတွန်ပဲ … အာ့နဲ့ နောက်ရက်မှာတခါထပ်သွားတယ်” ဆရာ ကျွန်မနူံးညောင်းပြီး ခေါင်းမကြည်သလိုဖြစ်နေလို့ပါ ” ဆိုတော့ ပေးလိုက်တဲ့ဆေးက ဘာမီတွန်ပဲ မတ်မတ်လည်း သိပ်တော့မကျေနပ်သေးဘူး ….ဒီရမ်းကု ဘာမီတွန်ဆေးပေးလို့မရအောင် ဘာရောဂါလို့ပြောရမလဲ အသည်းသန်စဉ်းစားနေရတာ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာသွားတယ်… အဲ ! စဉ်းစားလို့ရပြီဆိုတဲ့နေ့ကျတော့… ဒေါက်တာဘာမီတွန်ရဲ့ဆေးခန်းထဲကိုရင်ကော့ဝင်သွားတယ်…. ဒင်း ဒီတခါတော့ဘာဆေးပေးမလဲပေါ့” ဆရာ ကျွန်မ ကလေးမလိုချင်လို့ သားဆက်ခြားချင်လို့ပါ … Read more